Shakiga ku wareegsan Shirka Shidaalka ee London (Akhriso 13 Arrimood oo xasaasi ah ) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Shakiga ku wareegsan Shirka Shidaalka ee London (Akhriso 13 Arrimood oo xasaasi ah )
1) Ma jiro Xisbi Mucaarad ah oo aan ka tirsanahay ama aan taageero, mana jirto cid aan ku taageerayo wax dhib u ah Dalkeeyga.
2) Shirka London ma ahan dhul lagaa qaadanayo ama laguugu heysto milkiyadiisa sida Dacwada Kenya nagala dhexeeyo, waa Deegaan milkiyadiisa laguu ogol yahay, laakin Nacfigiisa laguugu heeysato.
3) In Shidaal la soo saaro waa muhim, su’aasha ayaa ah. waa maxaay Deg degtu?, Maxaase waqtigaan loogu beegay?.
4) Ma dhameeystirno sharcigii shidaalka iyo Heyadihii shaqada ku lahaa. Somali Procurement Agency, Internal oil regulations, income tax act, Land act, Environmental Management act, Resource sharing agreement, Revenue sharing agreement, Petrol Bill, looma dirin Shirka Dadkii bartay Sharciyada Caalamiga ah ee Shidaalka iyo Dhaqaala yaqaanadii qiimeeyn lahaa isbedelka. Sharciga Shidaalka lama horgeeyn Baarlamaanada, Somali land weli si sharci ah ugama go’in Dalka. Xaq ayey wax uga leedahay Shidaalka illaa hadda, lagalamana tashan, Goballadu hab qeybsigii ma dhameystirin, laakin hadda waxaa lagu qanciyay in ey ka aamusaan, dibba haka qeyliyaane, wakiil rasmi ahna uma joogaan.
6) Ma jiraa waddan Crisis ku jiro oo heshiis petrol lala galay? Somaliya kama jirto degenaan Siyaasadeed, iyo Nabadgalyo la isku haleeyn karo. Cudurka Siyaasadeed ayaa u baahan in la xaliyo. Ma Jirto Dowlad “Shacabku” soo doortay oo si rasmi ah u meteli karto. Kama hadleyno Aqoonsi iyo xiriir caalami ayaa nala siiyay, isma laha Labadu. Waxa laga hadlayana waa heshiis Ballaayiin Dollar ah iyo muddo gaari karto 100 Sanno in lagaa Saxiixo la rabo, Heshiisyadii Dowladihii Somalida ee dagaalada ka horeeyay ayaa 30 sanno ahaa, qaarkood.
7) Halka laga hadlayo waa Badweyn “ off shore- over 200 m. miles”, Shirkadaha halkaa wax ka qodi karo waa xaddidan yihiin, kharjkuna waa badan yahay, Shirkadaha waaweyne kama soo qayb galayaan Shirka London, waxaa ka soo qayb galaya Shirkado yar yar ama Shirkado mar dhaw la sameeyay, 90% Shirkadaha awooda u leh in ey halkaa Shidaal ka soo saaraan ma imaanayaan Shirka Londan.
Previous articleNinkii dilay agaasimihii Dekadda Magaalada Boosaaso ee Paol Farmosa oo ku geeriyooday Isbitalka
Next articleHay’adda NISA oo shaacisay howlgal ka dhacay Sh/Hoose oo lagu dilay maleeshiyo ka tirsan Alshabab